2 taleefan cusub oo leh Firefox OS: Keon iyo Peak | Laga soo bilaabo Linux
2 taleefan cusub oo leh Firefox OS: Keon iyo Peak
GeeksPhone Keon iyo Peak waa magacyada labada taleefan cusub Firefox OS loogu talagalay horumariyeyaasha. Sumadda Isbaanishka ayaa maalmo ka hor si rasmi ah uga dhigtay munaasabad si wadajir ah loola soo abaabulay Telefónica iyo Mozilla, daaha ka qaadaya astaamo badan oo farsamo iyadoo ilaalinaysa sidii lama yaqaan xog muhiim ah, sida kanaga qiimaha ama taariikhda helitaanka.
2 Keon iyo Peak: 2 Telefoon oo leh Firefox OS
Nidaamka cusub ee qalliinka, sidaan ku aragnay fursad kale, waxaa lagu dhisay heerar web furan.
Sidoo kale, waxay hoosta ka xarriiqeen oo ay carrabka ku adkeeyeen sida ay uga go'antahay xorriyadda labada horumariya iyo kuwa isticmaalaba. Horumariyayaashu, dhankooda, waxay fursad u lahaan doonaan inay barnaamijyadooda uga qaybiyaan degelkooda ama keydka arjiga Firefox. Marka laga eego dhinaca isticmaaleyaasha, Mozilla had iyo jeer waxay ka taxaddaraysaa inay ixtiraamto xorriyaddooda iyo asturnaantooda. Firefox OS uma baahnid inaad ka walwasho iibka ama u adeegsiga ujeedooyin aan caddayn oo macluumaadkeena shakhsiyeed.
Keon iyo Peak: 2 Telefoon oo leh Firefox OS
Telefónica, GeeksPhone iyo Mozilla waxay sii daayeen laba taleefan oo cusub oo wata Firefox OS. Haatan iyagu waa noocyo, terminals loogu talagalay horumariyeyaasha loo yaqaan "horudhaca horudhaca" taas, mabda 'ahaan, aan si xor ah looga iibin doonin dadweynaha guud.
GeeksPhone Keon iyo Peak waxaa loo soo bandhigayaa sida boosteejooyin aad u fudud oo ku jira qalabkooda, oo wakiilka ugu badan uu yahay nidaamka hawlgalka: Firefox OS. Waa wax la yaab leh in ay kaliya ku daraan 512 MB oo RAM ah, oo ah sawir hooseeya marka la barbar dhigo tartanka laakiin taasi way ku filnaan kartaa haddii nidaamka qalliinka uu waxtar leeyahay.
Processor Qualcomm Snapdragon S1 1Ghz
GSM850/900/1800/1900 (2G EDGE)
3,5 ″ HVGA Soo bandhig badan
3MP kamarad gadaal ah
MicroSD, Wifi N, nalka iyo dhawaanshaha dareeraha, G-Sensor, GPS, MicroUSB
1580 mAh batari
Bilaash, waad ku dari kartaa SIM kasta
Qualcomm Snapdragon S4 dual-core 1,2 Ghz processor
4,3 ″ qHD IPS shaashad badan
8MP kamarad gadaal ah, 2MP kaamerada hore
MicroSD, Wifi N, nalka iyo dhawaanshaha dareeraha, G-Sensor, GPS, MicroUSB, Flash
1800 mAh batari
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » 2 taleefan cusub oo leh Firefox OS: Keon iyo Peak
Aad u awood badan isla markaana dhererkiisu yahay taleefannadan oo Firefox uu na soo bandhigayo, waxaan rajeynayaa inay leeyihiin guusha ay mudan yihiin.
Aniga, Aniga, waxaan rabaa meesha ugu sarreysa, midkoodna kuma wada siin doonaan halkaas heh heh heh
Ku jawaab mansanken
Ka taxaddar, waa 4GB Flash Flash ..
Jawaab José Feghali
Waxaan rajaynayaa Firefox OS inay leedahay mustaqbal wanaagsan oo ay sifiican u soo dhoweeyeen dadka isticmaala!
Waxaan rabaa xD waxay leeyihiin midabyo qurux badan
Mathias mckeenan dijo
Aad bay u qurux badan yihiin. Waxaan doonayaa mid, waxaan rajeynayaa inay gaaraan Uruguay
Jawaab ku bixi Mathias Mckeenan
henry ernesto aquino dijo
xiiso leh Waxaan jecelahay meesha ugu sarreysa inay leedahay waxqabad wanaagsan 😀 aan aragno sida uu u kordhayo OS-ga wareega
U jawaab henry ernesto Aquino
Tan iyo Sabtidii la soo dhaafay sii deynta taleefanka gacanta waa sharci darro Mareykanka
U qaabee usb ka Fedora qaab ahaan